Daawooyinka dabiiciga ee ugufiican dhibaatada dhukay ee dhagaha | Ragga Stylish
Gudaha kanaalladayada dhegaha, waa iska caadi walax dabiici ah ayaa la sameeyaa, taas oo uu leeyahay shaqada of Ka ilaali gudaha gudaha soo gelitaanka dhammaan noocyada cunsurrada, boodh, wasakh, fayras ama bakteeriya, oo waxyeello u geysan kara.
In kasta oo wax dhagtu leedahay shaqo dabiici ah, haddii ay jiraan wax ka badan, waad heli kartaa dareemid wareer, wareer, cuncun, xanaaq, maqal la'aan, iwm.
La nadiifinta dhegaha waa lama huraan, oo sidaas waa loo sameeyaa si joogto ah.
1 Waxyaabaha Sababa Wax Kordhinta Dhegaha
2 Astaamo noocee ah ayaan ku leenahay wax ka badan dhukay?
3 Faa'iidada milixda
Waxyaabaha Sababa Wax Kordhinta Dhegaha
Dhamaanteen waan adeegsanay kuwa caanka ah suuf ama "swabs" si wax looga saaro dhegaha. Saamaynta ay maacuunyadan yar yar soo saari karaan, in kastoo ay u eg tahay inaysan u ekaanin, waxay noqon kartaa ka soo horjeedka waxa la doonayo. Taasi waa, in ka badan ka saarista dhukayga dhegaha, way ku riixaan wayna ku soo ururtaa.
Sidoo kale dhukku wuxuu asal ahaan ku imaan karaa isagoo isticmaalaya walxaha farta lagu fiiqo, sida fargeetooyinka ama maacuunta la midka ah, oo aan dhammaanteen u isticmaalno sidii aan uga saari lahayn wax dusha sare ka soo baxa.
Astaamo noocee ah ayaan ku leenahay wax ka badan dhukay?
Marka lagu daro dareenka cuncunka caadiga ah, oo aan ugu talo galnay inaan ku yareyno adoo u soo bandhigaya dhammaan noocyada qalabka dhegta, dhukku wuxuu sababi karaa dawakhaad, wareer, wareer iyo xanuun. Xaaladaha ugu daran, maqal la'aanta xitaa way dhici kartaa.
Xalka cusbada cusbada leh waxaa lagu helaa isku dar shaaha oo cusbo ah nus koob biyo ah, ilaa sifiican u milma. Markii aan isku darno, xoogaa cudbi ah ayaa lagu dhex ridayaa, iyadoo dhawr dhibic oo xalka ah lagu shubayo dhegta, iyadoo madaxa wax yar kor u fooraraya
Hydrogen peroxide waa shey inta badan laga helo guryaha, daaweynta nabarrada, jeermiska jeermiga, iwm. Isku darka 3% hydrogen peroxide oo biyo ah waxay noqon kartaa daawo dabiici ah oo aad ufiican oo lagaa saaro dhegaha.
Ilaha sawirka: Dr. David Grinstein Kramer / Machadka ORL-IOM
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Wax dheeri ah malahan dhegahaaga? Waxaa jira dawooyin dabiici ah oo waxtar badan